Caqabadaha Sharci ee Xeer Illaalinta horyaal kadib weerarkii lagu xiray C/raxmaan C/shakuur Warsame – Shacabka News
Caqabadaha Sharci ee Xeer Illaalinta horyaal kadib weerarkii lagu xiray C/raxmaan C/shakuur Warsame
Maanta gelinka danbe ayaa ku eg wakhtiga loo qabtay Xeer Illaalinta dowlada Federaalka inay maxkamada Banadir hor keento cadeynta ay ku heyso Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ay ciidamada [Xasilinta] weerar ku qaadeen gurigii uu ka degenaa Muqdisho habeenkii Axada ee Isniinta soogaleysay.
Xeer illaalinta ayaa shalay laga diiday codsigeedii ahaa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur xabsiga lagu siihayo 5 maalmood inta ay ka dhameystirayaan baaritaankooda.
Sharciga ayaa diidaya oo aan fasaxeyn in dowlada cid iska xirato iyadoo aan marka hore cadeyn u hayn danbiga uu qofkaasi galay, mana banaana in markii ay xiraan kadib baaritaan ay kiiskooda ku xoojinayaan si sharci daro ah ku dhistaan.
Garsooraha Maxkamada Darajada Kowaad ayaa diiday codsiga Xeer Illaalinta isagoo ay la yaab ku noqotay in dowladu aysan soo bandhigin shalay cadeynta ay ku heysato CC Warsame kadib xili uu dhacay Weerar ay dad ku dhinteen, dhaawacna loo geystay siyaasiga lasoo qabtay oo kamid ah xisbiga Wadajir.
Qaabka Sharciga ah ayaa ah:
A- Dacwada in laga keeno qofka ama lasoo eedeeyo.
B- In hay’adaha Danbi baarista ama Booliiska baaritaan sameeyo.
C- In natiijada baaritaanka hadii danbi lagu helo loo gudbiyo xeer illaalinta.
D- In xeer illaalinta cadeynta danbiga ay horgeyso maxkamada si loogu jaro waaran.
E- In la fuliyo waaran maxkamada oo qofka markaasi ay booliiska soo qabtaan.
Dhamaan nidaamkan sharciga ah ayey u muuqataa in dowlada ay dabo gedisay oo ay ka bilowday meeshii ugu danbeysay oo ah inay qofkii soo xirtay iyadoo aan marin dhamaan wadooyinkii ka horeeyey sida ka muuqatay doodii ay xeer illaalinta shalay maxkamada la hor-timid.
Qareenada u doodaya C/raxman C/shakuur ayaa si cilmiyeysan uga hadlay khaladaadka muuqda iyo qaabkii lagu soo xiray Siyaasigan:
1-Ma jirin Maxkamad xukuntay soo xirida Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakur.
2- Ma jirin Waaran lasiiyey Booliiska
3- Ciidanka soo qabtay ee Weerarka geystay ee [Xasilinta] maaha kuwii qaabilsanaa hawlaha noocaan ah, waxayna geysteen weerar aan loo baahneyn oo uu dhiig badan ku daatay.
Hawl-galkan ayaa lagu beegay xili habeen ah taasi oo loo sababeeyey iska caabinta illaalada oo kala garan weyday cida soo weerartay.
4- Xeer illaalinta oo soo bandhigi weyday cadeynmo rasmi ah oo la xariira dacwada ay kusoo oogeen ee ku sheegeen Khiyaano Qaran ama Qaran Dumis, marka laga reebo hadalada afka ay ka sheegeen.
5- Baaritaanka lagu sameeyey guriga siyaasiga oo aysan maxkamada xukumin, taasi oo meesha ka saareysa wax walba oo ay xeer illaalinta sheegto inay gurigaasi kasoo heshay inay la hortimaado maxkamada maadaama hawl-galkaasi sharci daro noqonayo waaran la’aan.
Taageerayaasha Cabdiraxman Cabdishakur oo ay ku jiraan xildhibaano shalay ku sugnaa Maxkamada ayaa hawl-galkan ku tilmaamay mid siyaasadeed oo aan nidaam sharci ah loo marin, waxaana muuqata inay adkaan doonto inay xeer illaalinta cadeyso danbiyada culus oo ay kusoo oogtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maadaama danbiga Qaran-dumis uu u baahan yahay cadeynmo badan oo ay adag tahay inay buuxiyaan, waxaa taasi usii dheer Qareenada siyaasiga la xiray oo heysta qodobo waaweyn oo dhiigii ku daatay hawlgalkaas dusha ka saaraya Dawlada.
Author Mohamed YarePosted on 20/12/2017 Categories MAQAALO, WARARKA MAANTA
Previous Previous post: Aqalka Kongresska Maraykanka oo ansixiyey qorshaha Donald Trump ee isbeddelka Canshuuraha.
Next Next post: 12 Dalxiisayaal ah ayaa ku geeriyooday shil ka dhacay dalka Mexico.